ဂျပန်အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေကာစီနိုအပိုဆု - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
လောင်းကစားခိုင်မြဲစွာဂျပန်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်း မှစ. နှစ်ဆယ်ရာစုကတည်းကရှိခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်အလောင်းအစားဟာ Arcade-စတိုင်အပန်းဖြေ Pachinko အပါအဝင်ရုံရှေးခယျြသောအားကစားများနှင့်စွမ်းရည်ကိုအပန်းဖြေအပေါ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, web based လောင်းကစားပတ်သတ်ပြီးအတူဂျပန်ကစားသမားအသိအမှတ်ပြုရန်ချိုသောများမှာအချို့သောပြင်ပတွင်အွန်လိုင်းကလပ်အနေဖြင့်, ဂျပန်သူ့ဟာသူအတွက် web based လောင်းကစားခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်, ယခု မှစ. အဘယ်သူမျှမထင်ရှားသောဂျပန်အွန်လိုင်း clubhouse ရှိပါတယ်။
1907 ကတည်းကဂျပန်အစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့ Betting ၏အဓိကအမြိုးမြိုးတစ်ဦး (အစပိုင်းတွင် 1630 အတွက် propelled ခဲ့သော) အမျိုးသားရေးထီ, Pachinko ၏ Arcade-စတိုင် session တစ်ခု, ဟောင်းတရုတ် tile ကိုလွှဲ Mahjong နှင့်မြင်း Hustle, စက်ဘီးစီးခြင်း, မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပါအဝင်ရွေးကောက်သောအားကစားထည့်သွင်း Dash နှင့်စပိဘုတ် Hustle ။
ဤသည် clubhouse ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားဘင်ဂိုကစားနဲ့ဖဲချပ်ဝေအပါအဝင်လောင်းကစားအပေါငျးတို့သအနောက်တိုင်းစတိုင်အမျိုးအစားများကိုဂျပန်၌မြစ်တားကြသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောင်းကစားမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်ဤအပန်းဖြေမဆိုကစားရန်အလိုရှိကြသည်တွင်ကြောင်းကစားသမားအနီးကပ်များကမကာအို၏ဧရိယာ (ထွက်ခေါင်းရမယ် အရာကဲ့သို့ပြုပါရန်) ဟောင်ကောင်နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့က Web based လောင်းကစား
ဂျပန်ရဲ့တင်းကြပ်လောင်းကစားဥပဒေများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအင်တာနက်လောင်းကစားခြင်းမရှိဂျပန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းလောင်းကစားကလပ်ရှိပါတယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်သော, မည်သည့်စွမ်းရည်, ပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်ဘောင်အတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ခွင့်မပြုကြောင်းသိသာသည်။ အမှန်မှာထိုဂျပန်အစိုးရအပြင်ဘက်သိမ်းယူ web based လောင်းကစားဒေသမူများမှာကစားယင်း၏ဘာသာရပ်များ frame ကိုဆန့်ကျင်သည်။
ယနေ့ခေတ်ရုံများစွာသောလူမျိုးအတွက်အမှုကဲ့သို့, may အဖြစ်ကမှရတဲ့သူတို့ဒီတော့ကောက်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်အပြင်ဘက် facilitated နှင့်သိမ်းယူဒေသမူများမှာဝင်ရောက်ရာမှတစ်ဦးချင်းစီကိုစောင့်ရှောက်ရန်တဖြည်းဖြည်းခက်တက်အကွေ့အကောက်များသောသည်နှင့်ဂျပန်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်။ ဒါကဂျပန်ကနေအများဆုံးအကောင်းဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်း clubhouse ကြိုဆိုကစားသမားအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်တွင်ကာစီနိုအပိုဆု
ဂျပန်အင်တာနက်လောင်းကစားပရိတ်သတ်တွေတာဝန်ခံကတ်များ Click2Pay, Instadebit, Ukash, UseMyFunds, EntroPay, ClickandBuy နှင့်မြောက်မြားစွာအခြားသူတွေထည့်သွင်း seaward နေရာများမှာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကို Store မှာနည်းစနစ်။
ယူရိုပါလိဂ်ကာစီနိုမှာ 65 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
165 Moobile အားကစားပြိုင်ပွဲကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
ချန့်စကာစီနို၏နန်းတော်မှာ 105 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
အခန်းထဲမှာကာစီနိုမှာ 40 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
145 SuomiAutomaatti ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Karamba ကာစီနိုမှာ 70 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
ကို Magic Box ကိုကာစီနိုမှာ 45 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
125 Dendera ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Kultakaivos ကာစီနိုမှာ 30 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
175 Vegas မှာ Winner ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Vinnarum ကာစီနိုမှာ 40 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Vinnarum ကာစီနိုမှာ 105 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Play70Win ကာစီနိုမှာ2မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
45 အခမဲ့ 123BingoOnline ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
ရတနာမိုင်ကာစီနိုမှာ 30 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
95 အခမဲ့ 7Bit ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Sun ကနန်းတော်ကာစီနိုမှာ 175 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Betfred ကာစီနိုမှာ 70 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
100 Sun ကနန်းတော်ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Trada ကာစီနိုမှာ 85 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
50 အခမဲ့ဘိုဟီးမီးယားကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
Playhippo ကာစီနိုမှာ 165 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
115 အခမဲ့ Portomaso တိုက်ရိုက်ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
1 ဂျပန်မှာတော့ Betting
2 ဂျပန်မှာတော့က Web based လောင်းကစား
3 ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးဥရောပအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း 2018:
4 ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း 2019: